Ururka Somali Journalists for Human Rights (SJHR) wuxuu ugu baaqayaa Dowlada Puntland inay.. | SOMALI JOURNALISTS FOR HUMAN RIGHTS (S.J.H.R)
Ururka Somali Journalists for Human Rights (SJHR) wuxuu ugu baaqayaa Dowlada Puntland inay ilaaliso Xoriyada Saxaafada, bahda warbaahintana wuxuu ku boorinayaa ilaalinta anshaxa iyo xeerarka saxaafada.
Bishii ugu danbaysay waxaa soo ifbaxayay khilaafaad kala duwan oo u dhaxeeya Wasaarada Warfaafinta Puntland iyo ururka warbaahinta Puntland khilaafaadkaa oo salka ku hayay xiritaankii idaacada Daljir, wax ka badalida xeerka saxaafada Puntland oo uu qayb ka yahay hannaanka qaadashada kaararka saxafinimada kuwaasi oo ay wasaarada iyo ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP mid walba ku doodayo in uu xaq u leeyahay bixintooda.
Saxafiyiinta ka howl gala deegaanada Puntland ayaa iyaan ku kala aragti duwan arimahaa oo sababay in ururka MAP laf ahaantiisu kala aragti noqdo qaybo ka mid ahina ay aaminsan yihiin in kaararka aqoonsiga saxaafada Puntland wasarada warfaafintu bixiso aana la abuurin cadaawad ka dhaxaysa Dowlada iyo warbaahinta qaybaheeda.
Ururka saxaafada iyo xuquuqul insaanka ee SJHR Wuxuu ugu baaqayaa in la abuuro jawi ay ku shaqayn karto warbaahin xor ah, lana tix galiyo fikirka hadalka iyo dhaqdhaqaaqyada saliimka ah ee saxafiyiinta lana sameeyo hanaan lagu xallinayo is faham waaga socda.
SJHR wuxuu ku boorinayaa bahda warbaahinta Puntland inay tixgaliso wadaniyada, nabadgalyada iyo horumarka deegaanadeeda si loo helo dowlad iyo bulsho wada fahmsan muhiimada saxaafadu leedahay ka fiirsi badana sameeya.
SJHR wuxuu dhiiri galinayaa Guddiga Baarlamaaniga ah ee uu Golaha Wakiilada Puntland u xil saaray arinka inuu xal ka gaaro khilaafka u dhexeeya Wasaarada Warfaafinta Puntland iyo ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP muhiimaduna tahay in si ka fool ka fool ah loo wada hadlo xal kama danbays ahna laga gaaro arintan soo noqnoqotay.
Waxaan boorinaynaa hadii aan nahay bahda ururka Somali Journalists For Human Rights (SJHR) in la helo saxaafad madax bannaan oo si xoriyadi ku dheehan tahay ku shaqaysa ilaalisana sharciyada iyo anshaxa saxaafada Soomaalida iyo adduunkaba.
Wixii xog ah oo dheeraad ah kala xiriir Aaden M Warsame +254725018687
Booqo barteena: www.sojohur.org
← SJHR’S Position on Accountability in Somalia
Somali Journalists for Human Rights (SJHR) advises the government of Puntland to uphold Press Freedom →